March na-ebupụta: iPhone 9, iPad Pro, MacBook na ọtụtụ ndị ọzọ ... | Akụkọ akụrụngwa
Mepụta March: iPhone 9, iPad Pro, MacBook na ọtụtụ ndị ọzọ ...
Ala nke asịrị juputara na ụbọchị ndị a. A maara nke ọma na Apple na-ejikarị ọnwa nke Machị amalite ọgụ dị mma nke ngwaahịa, n'ozuzu ndị na-abụghị "ọkọlọtọ". Agbanyeghị, ya na ụlọ ọrụ Cupertino anyị nwere ike ịtụ anya ihe ịtụnanya mgbe niile, yana dịka asịrị kachasị ọhụrụ anyị ga-enwe ha n'ụdị niile. N'ime ọnwa Machị anyị ga-ahụ iPhone 9, iPad Pro ọhụrụ, MacBook ọhụrụ na Apple Tags ndị a na-atụ anya ya. Nọnyere anyị ma chọpụta ihe niile na-abịa ọnwa na-abịa site na ụlọ ọrụ nke apụl bitten.
Dị ka mgbe niile, ịbụ asịrị, ọ dị mma ka anyị "were ya na ndị tweezers", mana ha na-abịa n'aka onye nyocha Ming-Chi Kuo, nke a maara kpọmkwem n'ihi na ọ dị ezigbo mkpa ogo ịga nke ọma mgbe ọ na-abịa n'ihe ndị a, anyị na-aga ebe ahụ na ngwaahịa na Apple na-aga ẹkedori dị ka ya na ọnwa nke March.
2 New iPad Pro
3 MacBook Pro na MacBook Ikuku Ume
4 Ike ike 4 TWS
5 Ikuku chaja na Apple Tags
6 Ọhụrụ Apple ngwaahịa na March
IPhone "dị ọnụ ala" ga-adị na oven. Ọ ga-enwe ihe karịrị ezigbo nhazi, 3GB nke RAM wee keta atụmatụ nke iPhone 8, na tiori. Enweghi otutu nkwuputa banyere ma o gha enwe a Plus version, obu ezie na anyi agagh eju anyi anya na enyere echiche Apple banyere ubara nha.
IPad Pro aburula ekele iPadOS na a ezi ozo ka PC ọ dịkwa "ekwo ekwo" ọtụtụ nde ndị ọrụ. O yiri ka ezigbo mmezigharị eruola, ọ bụ ezie na anyị chere na ha ga-anọgide na nhazi nke ugbu a, yana ọdụ ụgbọ mmiri njikọ na ID ID.
Ya mere, ntaghari ohuru ga-abụ nke dị n'ime, ume ọhụrụ nke ngwaike dị n'ime, n'agbanyeghị agbanyeghị na ọ dị oke ike, anaghị afụ ụfụ. Ihe ngosi ohuru ohuru a ga - eleba anya na onu ogugu, ya mere o gha gunye kamera azụ 3D na ihe mmetụta ToF. Ọ ga-enwekwa batrị ọzọ na imewe ọkụ.
MacBook Pro na MacBook Ikuku Ume
E nwere MacBook Pro na pipeline, anyị na-ekwu okwu kpọmkwem banyere 13-inch MacBook Pro. Tumadi na keyboard ga-ọhụrụ, na-aga iji keyboard ugbu a wee bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya, O doro anya na ọ dịghị mgbanwe nha ihuenyo ma na nha ngwaahịa.
Ma MacBook Pro na Ikuku ga-enwetakwa ndị nhazi ọhụrụ 10nm site na Intel ke Ice Lake nso. Anyị na-eti mkpu maka ya.
Ike ike 4 TWS
Achọpụtala ọtụtụ ihe banyere ya, mana ọ dịghị ewute ya icheta ya. Na nso nso a ahụla na iOS 13 site na akara ngosi, ma nke a Ike ike 4 TWS Ha dị nso na nkuku ma doro anya na ha ga-eketa njirimara sitere na ụmụnne ha ndị AirPods.
Anyị ghọtara nke ahụ ga-agụnye "Hey Siri", ndị na - emepụta ụda ọhụrụ na atụmatụ niile na - eme AirPods Pro bụ ngwaahịa pụrụ iche dịka ama ama Nkagbu Noise. Igweisi maka ndị na-eme egwuregwu nwekwara ọnọdụ ha, o yikwara ka Apple kpebisiri ike na ọ ga-enwe ọmarịcha ọkwa site na AirPods Pro.
Ikuku chaja na Apple Tags
Na-echeta chaja wireless chaja? Ee mụ onwe m. Otu n'ime ọdịda kachasị njọ nke ụlọ ọrụ Cupertino. Agbanyeghị, na-eche maka ire ọtụtụ nkeji nke ụdị ngwa ọ bụla na ọnụ ahịa mara mma, ụlọ ọrụ Cupertino pụtara na ọ nwere chaja ikuku na mmepụta (Gini mere na eweghi ha na mbu?) Ezubere iji chaja otu ngwaọrụ, mana iji aka Apple.
Ndien ke akpatre ọwọrọetop Apple Tags. Ngwaahịa ndị a ga - enyere anyị aka ịchọta ma hazie ọtụtụ ngwaọrụ ngwa ngwa, ihe omuma ama mara nke oma bu Tile firm. Ngwaahịa a nwere ike na-egbu oge a obere na-adịghị oru ozugbo na ọnwa nke March, ma n'ihi na ugbu a ihe niile na-egosi na Apple ngosi ke March ga-abụ nnọọ na-akpali, cheta na i nwere ike ịchọpụta banyere ihe niile dị ka mgbe niile, na iPhone News.
Ọhụrụ Apple ngwaahịa na March
Ọ bụchaghị Apple kwesịrị ịme ngosi na ọnwa nke Machị, Agbanyeghị, n'afọ gara aga na-aga n'ihu na njedebe nke ọnwa (nke 25) ha nwere obi ụtọ ịhapụ anyị ọtụtụ nkọwa na ngwaahịa. Ya mere, anyị nwere ike ikwu na anyị na-eche Apple ka ọ kwado ụbọchị ahụ, ma ọ ga-afọ obere ka ọ bụrụ na ụlọ ọrụ North America ga-ahapụ anyị ka anyị meghee ọnụ anyị ọzọ.
Bụrụ na ọ nwere ike, na ọwa a telegram (Jikọọ) ị ga-enwe ike ịmata ozi niile. Ozugbo enwere ụbọchị, anyị ga - enweta "Live" nke ị ga - eso anyị ihe niile enyere ma anyị kwadoro na ọ bụrụ na ị na - eche ịzụrụ iPhone, iPad, MacBook ma ọ bụ AirPods, chere ma ọ dịkarịa ala ruo ọgwụgwụ nke March, ọ bụrụ na ịnwere ike ịnweta ụdị ngwaahịa ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Apple » Mepụta March: iPhone 9, iPad Pro, MacBook na ọtụtụ ndị ọzọ ...
Etu esi eji ma budata Byte, onye nọchiri Vine